10 xaqiiqo oo ku tuseysa in ciidamo Soomaaliyeed ka dagaalameen Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
10 xaqiiqo oo ku tuseysa in ciidamo Soomaaliyeed ka dagaalameen Itoobiya
Waxaa jira xaqiiqooyin aan la inkiri karin oo muujinaya in qaar ka mid ah askartii ay Dowladda Fadaraalka u qaadday dalka Eritrea, la geeyay waqooyiga Itoobiya si ay garab u siiyaan ciidamada difaaca Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kaydmedia Online, waxa ay soo bandhigeysaa 10 dhacdo oo dhamaantood la xarira arrinka askarta Soomaaliya ee tan iyo dhamaadkii sanadkii hore raqdooda iyo ruuxooda la raadinayo.
Xaqiiqada 1-aad, Bishii Luulyo 2018, Itoobiya iyo Ereteriya waxay kala saxiixdeen heshiis nabadeed waxayna qorsheynayeen inay horumariyaan "iskaashi dhow". Isku soo dhawaanshahaas kadib, waxaa si aad ah u xumaaday xiriirkii ka dhaxeeyey Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo Maamulkii Gobolka Tigray, taas oo qasab ka dhigtay in Abiy uu raadsado xulufo aan maxalli ahayn.
Xaqiiqada 2aad, isla sanadkaan Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki, iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, ayaa dhidibada u taagay wax ay ugu yeereen is-kaashi, aan baannanka la soo dhigin runtiisa, kaas oo ay hareynayeen arrimo badan oo mugdi ku jiro.
Xaqiiqada 3aad, Eritrea, oo ah dal go’doonsan, duniduna saartay cunaqabaten, dhaqaalo la’aanna la daalaa dhaceysa, ayaa xilli habeen ah loo daabulay kumanaan dhalinyaro ah oo si qarsoodi ah loo qoray, kuwaas oo lagu qaaday diyaaradda Ethiopian Airlines.
Xaqiiqada 4aad, Inkastoo uu caadeystay safarrada labada dal, haddana wax ka yar bil, ka hor bilowgii duullaanka milatari ee ka dhanka ahaa TPLF, Farmaajo wuxuu ka degay Eriteriya, kadib kalgii taliyaha Ereteriya, Isaias Afwerki, wuxuu isla maalmahaas u safray Itoobiya, waxaana xigay kulan qarsoodi ah oo Addis Ababa ku dhexmaray taliyayaasha sirdoonka ee Saddexda waddan.
Xaqiiqada 5aad, Warka la xariira in Ciidamo Soomaaliyeed ka dagaal gaaleen gudaha Itoobiya wuxuu si xooggan u soo if-baxay 18 January 2021, hayeeshee maalin kadib oo ku beegneyd 19 January 2021, Dowladda Soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay wararka sheegaya in Askar Soomaaliyeed ku dhinteen dagaalka ka dhacay waqooyiga Itoobiya.
Xaqiiqada 6aad, Isla maalmahaas waxaa Magaalada Muqdisho si qarsoodi ah u soo gaaray taliyaha militariga Ethiopia gaar ahaan qeybta Oromada iyo taliyaha Sirdoonka wadanka Eritrea, waxayna Xarunta Hay'adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Qaranka ee Habar Khadiija, kula kulmeen agaasimaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji.
Xaqiiqada 6aad, 22 January 2021, Kadib cadaadis xooggan oo Dowadda Fadaraalka ay kala kulantay waalidiinta iyo guud ahaan bulshada, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Itoobiya, Danjire Dina Mufti, ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin wararka sheegay in ciidamo Soomaali iyo Eritrean ah ay ka qeyb qaateen dagaalka ka dhacay Itoobiya. Nassib wanaag hadda qof walba waa ogyahay in ciidamo Eritrean ay ka qeyb qaateen dagaalkii Itoobiya.
Xaqiiqada 7aad, Warbixin ka soo baxday Guddiga QM ugu qaabilsan Xuquuqda Aadanaha ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar loogu qaaday dalka Eratariya ay ku lug lahaayeen dagaalkii lagu qaaday gobolka Tigreega ee Itoobiya.
Xaqiiqada 8aad, Maanta sida uu sheegay sii hayaha ku-xigeenka Xoghayaha Waaxda Arrimaha Afrika ee Mareykanka, Robert F. Godec, Mareykanku wuxuu xaqiijinayaa in ciidamadii Soomaaliya ee loo qaaday Eritrea lagu arkay gudaha Itoobiya.
Xaqiiqda 9aad, Tan iyo markii uu soo baxay warka dhalinyarada loo sheegay in loo qaadayo dalka Qater ee laga dajiyay Eritrea, kadibna laga dagaalgaliyay waqooyiga Itoobiya, majiro war raasmi ah oo Dowlaadda Fadaraalka ay ka soo saartay, waana muddo ku dhow lix bilood.
Qodobka 10aad, 20 Maalmood ayaa ka soo wareegtay markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble uu magacaabay guddi soo baara cabashada waalidiin Soomaaliyeed, mana jiro wax shaqo ah oo ilaa iyo hadda uu guddigu qabtay, isla-markaana uu la wadaagay bulshada.